Saddex barnaamij oo cusub oo arki kara iftiinka maalinta ee WWDC 2021 ayaa la sifeeyey: Maskaxda, Talooyinka iyo Xiriirada | Wararka IPhone
Saddex barnaamij oo cusub oo arki kara iftiinka maalinta ee WWDC 2021 ayaa la sifeeyey: Maskaxda, Talooyinka iyo Xiriirrada
Saacadaha kahor bilowga WWDC waa inay had iyo jeer dhibsadaan Apple. Daraasiin iyo daraasiin shaqeynaya, barnaamijyo iyo warar ku saabsan nidaamyadooda hawlgalka ayaa la sifeeyey ka hor bilaabitaankooda. Si kastaba ha noqotee, waxay nolosha u keenaan muuqaal tartan sii kordheysa leh iyagoo siinaya waxyaabaha ugu fiican ee la siinayo ayna hubiyaan in Apple ay taxaddar badan u leedahay macluumaadkaaga sidii hore. Munaasabaddan, waxay heleen tilmaamo saddex barnaamij oo cusub oo ku yaal App Store. Waxaa ka mid ah Maskax, Xiriirrada y Talooyin kaas oo laga heli lahaa watchOS 8 markii ugu horeysay tan iyo markii la bilaabay daawashada. Maxay yihiin ujeedooyinka ka dambeeya barnaamijyadan cusub ee Apple?
1 WWDC 2021 ma naga yaabin doonaa seddexdan barnaamij ee cusub?
2 Maskaxda, Tabaha iyo Xidhiidhada ... maxaa kale oo Apple diyaarinaya?
WWDC 2021 ma naga yaabin doonaa seddexdan barnaamij ee cusub?
Waxay u egtahay in qof hore u daabacay astaanta cusub ee App Store? Marabtaa inaad qiyaasto waxa "https://t.co/nhhpJFmZbJ.Mind ”waxay ku jirtaa watchOS? pic.twitter.com/BarzoJtovq
Khaos tian ayaa mas'uul ka ahaa toogashada gantaal cusub oo bartilmaameedsaday bartilmaameedka daadinta. Dhowr saacadood ka hor waxaan daabacay qoraal ah kaas oo waxay muujisay saddex galitaan oo cusub oo ah Aqoonsiyada barnaamijka ee App Store. Xaqiiqdii, sawirka hoggaaminaya maqaalka waxaad arki kartaa saddexda qoraal ee cusub:
Sida Tian sharaxay, markay barnaamijyadu Nano hortooda ku jiraan samee codsiyada tixraaca ee Apple Watch la jaan qaada watchOS. Marka, adoo fiirinaya aragti ahaan, tufaaxa weyn wuxuu isu diyaarinayaa inuu soo bandhigo saddex barnaamij oo cusub, ugu yaraan, taas oo ay ku soo bandhigi doonaan furitaanka aasaasiga ah ee WWDC 2021 berri, Juun 7.
Safari, Farriimaha, Caafimaadka iyo Khariidadaha ayaa dib loogu cusboonaysiin karaa iOS 15
Maskaxda, Tabaha iyo Xidhiidhada ... maxaa kale oo Apple diyaarinaya?
Waxay u badan tahay taas Mind noqo barnaamij ku jira qaabka ugu fiican ee Neefsashada ee Apple Watch. Ujeeddada? Waxaa laga yaabaa inay tahay in la wanaajiyo caafimaadka maskaxda dadka isticmaala gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo xaalada aan soo marnay sanad iyo badh. Si kastaba ha noqotee, lama garanayo waxa ay ka kooban tahay iyo xitaa haddii ay sidoo kale diyaar u noqon lahayd watchOS ama iPadOS. Ugu dambeyntii, Talooyin iyo Xidhiidh ugu dambayntiina waxay ku imaan doonaan watchOS 8 si madaxbanaan ka dib markii aysan qayb gaar ah u hayn iyaga tan iyo bilowgii watchOS.
Sidan oo kale, isticmaalaha leh Apple Watch oo ku xiran shabakadda xogta wuxuu awoodi doonaa inuu si dhakhso leh u soo waco barnaamijka Xiriirada isagoo aan u baahnayn: ama ka soo wac iPhone ama ka helo xiriirada ku jira barnaamijka Telefoonka. Aad ayey ugu fududahay barnaamij aan rajeyneyno inaan si dhaqso ah ugu arki doonno saacadahayaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » WWDC 2021 » Saddex barnaamij oo cusub oo arki kara iftiinka maalinta ee WWDC 2021 ayaa la sifeeyey: Maskaxda, Talooyinka iyo Xiriirrada
IOS 15 waxay keeneysaa bar ogeysiis cusub, wax badan oo loo adeegsado iPad-ka iyo hagaajinta arrimaha gaarka ah